Ukuthi uyaphi uma kunganikezwa i-insulin > Insulin
Ngingayithenga i-insulin ngaphandle kwemiyalelo
Ukuthenga isidakamizwa kulula kakhulu. Uma umthamo we-hormone udingeka ngokushesha, futhi isifo sikashukela siphelelwe i-insulin, ezimweni eziphuthumayo singathengwa ekhemisi elisebenzisana nokulethwa okukhethekile komuthi. Kungcono ukubiza wonke amaphuzu aseduze athengiswayo ngaphambi kwesikhathi ukuze uthole ukuthi lo mkhiqizo uyathengiswa yini, ngoba akuwona wonke amakhemisi athengisa izimpahla ezinjalo.
Ungawuthenge mahhala lo muthi uma uya kudokotela wakho we-endocrinologist bese ubhala incwadi kadokotela. Imithi ekhethekile inikezwa ngumthetho kwizakhamizi zaseRussia Federation nakwabangaphandle ngemvume yokuhlala. Obani abaye batholakala benesifo sokuxakaniseka nesifo sikashukela i-insulin. Ukuhlinzekwa kwalezi zinzuzo kulawulwa umthetho wobumbano ngosizo lukahulumeni lwe-178-FZ kanye nesinqumo sikaHulumeni No. 890.
Udokotela we-endocrinologist noma udokotela ojwayelekile, osohlwini lwabantu abahlinzeka ngezidakamizwa ezikhethiwe, unelungelo lokukunikeza incwadi ngokuthenga kwama-insulin mahhala. Le rejista lenziwa yiziphathimandla zezempilo zakwamanye amazwe.
Iresiphi enjalo ayitholakali ku-Intanethi, ngakho-ke kufanele unakekele ukuthola lo mbhalo kusenesikhathi uma i-insulin iphela. Umuntu onesifo sikashukela kufanele avakashele udokotela uqobo, ngemuva kokuhlola nokwamukela irekhodi lokwelashwa, kunqunyelwa umthamo othile, isiguli ongasithola mahhala.
Ukunikeza umuthi, isiguli kumele sibe nemibhalo eminingana:
Kunikezwa ifomu lokuyalela lapho kubhaliswa khona umuntu onesifo sikashukela, ngakho-ke kudingeka ipasipoti. Kubalulekile ukucubungula uma umuntu engahlali endaweni yokubhalisa, kufanele ukhethe kuqala isikhungo sezokwelapha bese unamathela enhlanganweni yezokwelapha ekhethiwe. Ungawushintsha umtholampilo ungadluli kanye ngonyaka.
Lapho uvakashela umtholampilo kumele ube sezandleni zomgomo womshuwalense wezokwelapha kanye nenqubomgomo yomshuwalense ngamunye (SNILS).
Ngokwengeziwe, kufanele kunikezwe isitifiketi sokukhubazeka noma omunye umqulu oqinisekisa ilungelo lezinzuzo.
Kuyadingeka nokuthi unikeze isitifiketi esikhwameni sempesheni esiqinisekisa ukungatholakali kokwenqaba ukuthola izinsizakalo zenhlalo.
Le mibhalo iyadingeka ukuze ugcwalise wonke amabhokisi eresiphi ekhethekile ngenkomba yezinombolo.
Iwanikezwa kuphi i-insulin mahhala
Ikhemisi lapho isikhungo sezokwelapha sesisayine isivumelwano sinelungelo lokukhipha umuthi mahhala. Imvamisa, udokotela unikeza amakheli ambalwa lapho abantu abanesifo sikashukela bengahanjiswa khona ngezindlela zokupheka ezikhethekile.
Ifomu lokugunyazwa livumelekile ekuthengeni kwamahhala kwe-hormone amasonto amabili kuya amane, isikhathi esiqondile singatholakala kuresiphi. Hhayi nje kuphela ukuthi isiguli sinelungelo lokuthola i-insulin, kodwa futhi nezihlobo zayo ekuhlinzekweni kwefomu lokuyalelwa.
Kungenzeka ukuthi ikhemisi okwesikhashana alinawo umuthi wamahhala, kulokhu, kufanele usebenzise inqubo elandelayo.
Okokuqala, kufanele uthintane nomphathi wekhemisi uqobo ukuze ubhalise idokhumenti yezokwelapha eqinisekisa ilungelo lokuthola umuthi okhethekayo ephephabhukwini elikhethekile.
Ngaphezu kwalokho, ngokomyalelo woMnyango Wezempilo kanye Nezokuthuthukiswa Komphakathi waseRussia, umuthi we-hormonal kufanele unikezwe isiguli isikhathi esingadluli izinsuku eziyishumi. Uma lokhu kungenzeki ngesizathu esihle, ikhemisi kufanele likutshele ukuthi ungaqhubeka kanjani nesifo sikashukela.
Uma ikhemisi liqala ukunikeza i-insulin ngomuthi, udinga ukuletha le nkinga kudokotela. Ngaphezu kwalokho, bafaka isikhalazo nge-TFOMS noma i-QS - lezi zinhlangano zinesibopho sokubheka amalungelo eziguli emkhakheni womshuwalense wezempilo ojwayelekile.
Uma ulahlekelwa yifomu lokuyalelwa, kufanele futhi ubonane nodokotela, azokubhala incwadi entsha futhi abike ukulahleka ekhemisi lapho kunqunywe inkontileka khona.
Lokhu ngeke kuvume abantu abangagunyaziwe ukuthi basebenzise idokhumenti lokukhethwayo.
Uma udokotela enganikeli incwadi kadokotela
Ngaphambi kokuthi wenze isikhalazo kubaphathi abaphezulu, kufanele uqonde ukuthi akuyena wonke udokotela onelungelo lokukhipha incwadi kadokotela. Ngakho-ke, kubalulekile ukukucacisa kusengaphambili ukuthi ngubani onegunya lokukhipha idokhumenti.
Uhlu lwabodokotela lungatholakala ngqo emtholampilo, kufanele lunikezwe isiguli lapho luceliwe. Lolu lwazi lukhona emphakathini futhi luyatholakala ngokubanzi, ngakho-ke luvame ukufakwa kumabhodi wolwazi.
Uma, ngasizathu simbe, udokotela engabhalanga incwadi kadokotela ekhethekile yesifo sikashukela, ngaphandle kokuxilongwa, udinga ukuthumela isikhalazo kudokotela oyinhloko wesikhungo sezokwelapha. Njengomthetho, kulesi sigaba, ukungezwani kuxazululwa, isiguli kanye nomphathi bafika esivumelwaneni sobabili.
Ungangena ngezindlela ezilandelayo:
sisebenzisa ukwelashwa okukhethekile okusebenzayo kwe-purecine ye-insulin,
ngesikhathi sokuphendula, lapho kuhileleka khona izakhi zofuzo eziguqulwe zofuzo zemvubelo noma i-Escherichia coli, ama-bacterium e-coli.
I-insulin enjalo i-biphasic. Kuhlanzwa kuqala, bese kuhlanganiswa kwisakhiwo sokugcina samakhemikhali. Ukwakheka kwalo muthi kuhlukile kakhulu kune-insulin ehlanzekile engeyona eyakhiwe. Abanye abazinze, ama-oxidizing agents kanye nama-bacterium asebenzayo wamagciwane afakiwe efomini lomuntu.
Indlela eyinhloko yokukhishwa yisisombululo somjovo. I-1 ml ingaqukatha amayunithi we-insulin angama-40 noma ayi-100.
Leli khambi lihlobene nokufakwa insulin okufushane. Izinhlobo eziyinkimbinkimbi ze-insulin-receptor ngaphezulu kolwelwesi lwamaseli amaningi, okuvela ngemuva kokuxhumana ngqo nobuso be-membrane yeseli. Ukuvela kwe-cycloo oxygenase ngaphakathi kwamaseli wesibindi nezinhlaka zamafutha kuyanda.
Uma isetshenziswa, imiphumela elandelayo engemihle ihlala iba:
ukubonakaliswa kwe-allergic: i-urticaria, i-edema kaQuincke,
ukuphefumula kanzima, ukwehla ngokuzumayo kwengcindezi,
I-hypoglycemia: ukujuluka okwandayo, ukukhukhumala kwesikhumba, ukwethuka nokuqothuka, indlala ephikelelayo, ukwanda kokuqina, ukuqwasha, i-migraine, ukuqubuka ngokweqile nokukhathala, ukubona okungalungile nokukhuluma, imisipha yobuso,
I-hyperglycemia ne-acidosis: umlomo owomile njalo, ukulahleka okubukhali kokudla, ubomvu besikhumba sobuso,
ukuluma nokuvuvukala endaweni lapho kwakusetshenziswa khona umuthi,
ukubonakala kokuvuvukala kobuso nezingalo, ukwephulwa kokuphikiswa.
Isixazululo se-insulin eyenziwe kwavunyelwa ngokuphelele ukuhlanganisa nezinye izixazululo zomjovo. Umphumela ophambili we-hypoglycemic ukhuphuka kuphela uma usetshenziswa ndawonye ngama-sulfonamides athile, ama-inhibitors we-MAO, nama-anabolic steroid. Ama-Androgens, ama-tetracyclines, bromocriptine, ethanol, pyridoxine kanye nabathile be-beta-blockers nabo bakhulisa umphumela wokusebenzisa umuthi.
Ungayithatha kanjani i-insulin yomuntu
Umthamo kanye nendlela yokuphatha eqondile kunqunywa kuphela ngesisekelo kashukela wegazi ojwayelekile, bese kuthi ngemuva kwamahora amabili kudliwe. Ngaphezu kwalokho, ukwamukela kuncike ebukeni bokuthuthuka kwe-glucosuria.
Imvamisa, ukuphatha okufiphaza. Kwenze imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla okuyinhloko. Uma kwenzeka isifo sikashukela esibuhlungu kakhulu noma i-kartaciditis, kufakwe i-insulin engalapheki, njalo emzimbeni noma emsipha we-gluteus, ngaphambi kokuba kwenziwe noma yikuphi ukuhlinzwa.
Kunconywa ukuphatha umuthi okungenani izikhathi ezi-3 ngosuku. Ukuze ugweme i-lipodystrophy eyingozi, awukwazi ukugwaza umuthi njalo endaweni efanayo. Ngemuva kwalokho i-dystrophy yamafutha angaphansi awabhekeki.
Isilinganiso umthamo wansuku zonke wabantu abadala ngamayunithi angama-40, futhi ezinganeni ngamayunithi ayi-8. Isimo sokuphatha senziwa amahlandla ama-3 ngosuku. Uma kunesidingo esinjalo, khona-ke ungathola i-insulin izikhathi ezi-5.
Ngaphambi kokuthi uqoqe ikhambi ngqo ebhodleleni, nakanjani kufanele ulihlole. Uma kuvela amazwibela, umuthi onjalo akufanele uphuzwe.
Umthamo we-insulin ulungiswa kuma-pathologies anjalo:
ukungasebenzi kahle kwe-yegilo yegilo,
isifo sikashukela asebekhulile.
Imvamisa, kuvela izibonakaliso ze-hypoglycemia eyingozi. Zonke zingabangelwa i-overdose, ukumiselela okubukhali kwe-insulin yomsuka ofanayo nomuntu, ukubulawa yindlala kanye nesifo sohudo, ukugabha nezinye izimpawu zokudakwa. I-hypoglycemia emnene ingamiswa ngokuthatha ushukela.
Uma kuvela izimpawu ezincane kakhulu ze-hypoglycemia, kufanele uthinte uchwepheshe ngokushesha. Ezimweni ezithambile, ukulungiswa komthamo kungasiza. Ezimweni ezinzima kakhulu, kufanele kusetshenziswe ukwelashwa okubonisa izimpawu zokuthi detoxification. Kaningi, ukuhoxiswa ngokuphelele komuthi noma ukwelashwa okubuyiselwe esikhundleni kuyadingeka.
Kumele kukhunjulwe ukuthi endaweni yokuphatha okuqondile, i-dystrophy yamafutha angaphansi angabonakala. Kepha lokhu kungagwenywa ngokushintsha indawo yemijovo.
Ukulawula izinga loshukela emzimbeni wowesifazane okhulelwe kubalulekile. Kwi-trimester yokuqala, isidingo se-insulin ehlanzekile sincipha kancane, futhi ekugcineni kwethemu kuyanda.
Ngesikhathi sokuncelisa, owesifazane angadinga ukulungiswa kokutholwa kwe-insulin nokudla okukhethekile.
Izimpawu ze-overdose zingavela kaningi:
I-hypoglycemia - ubuthakathaka, ukujuluka ngokweqile, ukuqina kwesikhumba, ukuzamazama komhlaba, ukuthuthumela kolimi, indlala,
I-hypoglycemic coma enesifo sokukhohlisa.
Ukwelashwa ikakhulukazi kuyimpawu. I-hypoglycemia emnene ingadlula ngemuva kokudla ushukela noma ukudla okune-carbohydrate eningi.
I-glucagon emsulwa iyajovwa ukumisa izimpawu zokweqisa ngokweqile. Uma kwenzeka ukuvela komqondo kungazelelwe, kufinyelela ku-100 ml wesisombululo se-dextrose esenziwe kahle kuze kube yilapho isiguli esinamandla sishiya ukoma.
Isifo sikashukela izingane kanye nentsha. Impilo Yesikole
awekho amagama :( uhamba ngomkhumbi :( manje akukho okuthengisiwe okungeniswa ezweni, i-pulmikrot, kukhona eyethu engasebenzi (sikhuluma ngezidakamizwa zamahhala), kodwa eyethu .. siyameseka umakhi wasekhaya, futhi asinendaba nempilo lokho konke kubantu, abantulayo beplastiki abasebenza kahle. yaphenduka izimbiza zeglasi ngocezu lwensimbi :( noma ngabe kwenza mehluko muni uma ngingatholanga izibuyekezo ezinhle :( iminyaka eyi-11 bathola imithi ejwayelekile.
Imininingwane yaqhamuka kumamncane wami - izolo ubesekhemisi elishibhile, emi emugqeni cishe ihora. Kukhona isixuku sabahola impesheni abanezinhlu zamakhilomitha, batshaye yonke into. Namuhla bengisekhemisi elifanayo, ngizame ukuthenga. I-Berodual for inhalation yi-vial yokugcina, i-intala nt. Kamuva ngaya ekhemisi ebiza kakhulu, ngathenga omunye umuthi, futhi nebhodlela lokugcina. Manje ubize umama wakhe ukuthi amxwayise, uthi umangele kakhulu izolo lapho ebone umugqa ekhemisi lasekhemisi, kubantu oyedwa noma ababili lapho. Manje-ke uma unawo.
Ngicela ungibhalele izindinganiso ze-insulin. Futhi ingabe ukuhlolwa kwegazi kwe-insulin kwembula isifo sikashukela esisezingeni eliphezulu?
Omengameli abazisuli sicela. kwezokwelapha, yonke into "isengxenyeni yayo" kuphela, futhi umuntu ephelele .. omama bezinye izingane ngezinye izikhathi bangcono kunodokotela. Isimo: umama uyagula, uneminyaka engu-72 ubudala, ukuhlanza kwaqala ngoNovemba. Noma yikuphi ukudla. Sengilahlekelwe ngamaphawundi angama-30. Sengivele ngidla i-pog eyodwa ngasikhathi. Kwakukhona isifo sikashukela esincike ku-insulin. Manje i-insulin ikhanseliwe. esibhedlela futhi futhi akukho mpendulo ukuthi iyini nokuthi ungamisa kanjani lokhu kuhlanza. Yini eminye imibono?
Inkampani yezokwelapha uLilly imemezele ukwethulwa kwephrojekthi entsha yezemfundo yezingane ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-I - ngokubambisana neDisney, kwenziwa incwadi yokufundisa ethi "Coco and Happy Birthday" kaCoco. Le ncwadi isitshela ngokwenzeka kwenkawu kaCoco, onesifo sikashukela sohlobo I. Izingane zibona kangcono imininingwane ngendlela edlalayo, ngokubamba iqhaza kwabalingiswa bezinsumansumane, ngosizo lwezinto ezisetshenziswe ngemibala, le ncwadi izosivumela ukuba sikhulume ngesifo esiyinkimbinkimbi lapho sitholakala kubo.
. UToronto wathola i-insulin, okwathi enjeni enesifo sikashukela yaqeda izimpawu zalesi sifo, futhi kakade ngo-1922 isiguli sokuqala esinesifo sikashukela saqala ukuthola imijovo ye-insulin. Ngo-1960, kwamiswa isakhi samakhemikhali se-insulin yabantu. Ngo-1976, i-insulin yabantu yadalwa kusuka ku-insulin yengulube, kwathi ngonyaka we-1979 kwenziwa i-genetic engineering synthesis ye-insulin yabantu.
Sinesifo se-celiac. Ihlelwe kakade eminyakeni engu-6 edlule. Odokotela babe sebesitshela ukuthi lesi sifo siyaqhubeka. Isifuba somoya sengezwe kukho. Ngemuva kwalokho i-hemochromatosis (imikhiqizo yensimbi ayinakuba), manje ushukela ukhuphukile. Angazi manje ukuthi ngizomondla ngani - ufulawa awuvunyelwe, ZONKE izinhlamvu azisenakwenzeka, inyama ayivunyelwe, kunensimbi eningi ezithelo, futhi nayo ayivunyelwe. Nginovalo! Mantombazane, bathandekayo, phendula, labo abanokuthile okufanayo. Ingane ayidli ngokudliwayo idla lokho abanikayo. Kepha angazi ukuthi ngiphambuke kanjani.
Uhlu lwakho lubucayi, kunjalo.
Ngiphinde ngeluleke u-Elina ukuthi afunde, kukhona imininingwane eminingi nezinto eziwusizo. Futhi-ke ubhontshisi kuphela oza engqondweni - kepha angiqinisekile ngazo zonke izinhlobo zensimbi.
Uma kukhona izinsolo zesifo sikashukela, khona-ke kubalulekile ukuthola ukuthi hlobo luni lwezinhlobo 1 noma 2nd. Okwesibili kulula kakhulu ngokudla.
Isifo sikashukela nokukhulelwa. Izifo ngesikhathi sokukhulelwa
. Ngaphambi kokuthi i-insulin isebenze njengomuthi, ukuzala izingane kwabesifazane abanesifo sikashukela kwakuqabukela. Ukukhulelwa kwenzeka kuphela kuma-5% abesifazane futhi kusongele izimpilo zabo, ukufa kwe-fetus kwe-fetus kufinyelele ku-60%. Ukwelashwa kwe-insulin kwavumela iningi labesifazane abanesifo sikashukela ukuba babe nezingane. Yize ukushona kwengqondo kwe-intrauterine kungenzeka futhi nangokwelashwa okunengqondo nokuphathwa kokukhulelwa, amathuba ayo ahlakaniphe kakhulu.
Ezinsukwini ezintathu nje ezedlule, ngithole ukuthi ngikhulelwe futhi nginqume ukubona ulwazi ngesifo sikashukela nokukhulelwa kwi-Intanethi, ngithole lesi sixhumanisi - kahle, okuwukuphela kwento engingathanda ukuthi odokotela bakhuthaze ithemba kanye nolwazi olubi kepha oludingekayo olunikezwe lapha. Ngokwami, anginalo inani elincane labantu abajwayele ukuxilongwa kwesifo sikashukela, ingxenye yabo isivele ibelethile, futhi mangisho ukuthi konke kuhambe kahle - ngokuqapha okufanele, izingane ezijwayelekile, eziphilile ngokuphelele ziyavela, yize esikhathini sethu umqondo wezingane onempilo unembala kakhulu.
. Isizathu saso umuzwa oncishisiwe wamaseli azenzele wona ama-insulin (ukumelana ne-insulin), okuhambisana nokuqukethwe okuphezulu kwama-hormone okukhulelwa egazini. Ngemuva kokubeletha, amazinga kashukela egazini avame ukubuyela kokujwayelekile. Kodwa-ke, amathuba okuthola isifo sikashukela sohlobo loku-1 nohlobo 2 ngesikhathi sokukhulelwa akunakuqedwa. Ukuxilongwa kwalezi zifo kwenziwa ngemuva kokubeletha. Lapho behlaziya imininingwane etholwe ngenxa yezifundo eziningi, odokotela bafika esiphethweni sokuthi bangaphezu kuka-5.
. Umama wesikhathi esizayo kufanele athole i-insulin - noma kunjalo, kungcono uma lokhu kwenzeka ngaphansi kokuqondisa kukadokotela: kuyaziwa ukuthi imithamo ethile yomuthi iyadingeka ezigabeni ezahlukene zokukhulelwa. Ngendlela, ngokunembile ngalesi sizathu, lapho nje umuntu wesifazane enesifo esidinga ukwelashwa njalo ekhulelwe, kudingeka abonane nodokotela: mhlawumbe, ngenkathi ingane ilindile, udokotela uzokweluleka ngokuthatha omunye umuthi. Isimo esijwayelekile: ngiphuza iphilisi? Kepha kuthiwani uma umama okhulelwe egula futhi wanquma ukukhululeka?
UMarina mayelana ne-West syndrome - I-West syndrome ikhona ikhambi
UMarina, njengoba ngifunde "ngesidlo sakho", ngaseshe i-Intanethi ukuthola imininingwane nge-West Syndrome. Ngithole futhi ngabukeka izinkundla ezinhle nezindatshana ezivela emazweni ahlukahlukene. Kuyiqiniso, angisiye uchwepheshe, kepha umbono wokuthi le "syndrome" imane nje isibonakaliso esifanayo sokuhlukahluka okutholakele noma okutholakele (ngokwesibonelo, ngenxa yokugoma) ukuphazamiseka kwe-metabolic, okungukuthi, akusona isimo esikhohlisayo esidinga ukuphathwa kahle, kepha imbangela yaso . Ake sicabange ngokunengqondo - uma ingane ikhule ngokujwayelekile ifinyelela ezinyangeni eziyi-9, bese kuthi lapho.
(ukungasebenzi kahle kobuchopho, i-tuber sclerosis, i-perinatal encephalopathy, i-thesaurismosis, njll.) nezindlela ze-cryptogenic. Ngefomu enezimpawu, ukukhula kwengqondo kwengqondo yezingane kuvame ukuhlupheka ngokuzalwa, kube ne-cryptogenic, kusukela lapho kuqala khona
imilenze, imvamisa nokulingana. Okujwayelekile kakhulu
Imisipha (“Ukuhlasela kweSunday”) ngokugoba kwentamo, isiqu, izingalo, ukugoba, ukuletha nokuphakamisa imilenze. Ukuhlaselwa kufushane, kuhlanganiswe nguchungechunge, kaningi
aqhamuke ngokushesha ngemuva kokuvuka kweziguli.
ukuthuthukiswa, ngokuvamile izimpawu ze-tetrapyramidal.
monotherapy noma ngokuhlanganiswa ne-ACTH. Eminyakeni yamuva, ngokusho kwababhali abaningi, kunconywa ukusetshenziswa kwe-vigabatrin ngethamo lika-100 mg / kg / ngosuku. I-Vigabatrin iyisidakamizwa sokukhetha ngokuphelele ekwelashweni kwe-SV ngenxa yesifo sofuba esibangelwa ukuqina komzimba. At
ukungabikho komphumela we-monotherapy, ama-AED ayisisekelo ahlanganiswa ne-lamotrigine,
i-carbamazepine noma i-benzodiazepines.
yempilo. Ngokuhamba kwesikhathi, i-SV iguqulwa ibe yi-SLH (amacala we-1/3) noma isifo sokuwa kwezinyawo ezinhlobonhlobo.
Intombazane yami ikhula ngokujwayelekile ifinyelela ezinyangeni ezingama-2,5. Kube nokuhlasela kokuqala.
Ukuhlolwa kukhombisa ukuthi akazalwanga ehlushwa i-IUI njengezingane eziningi, kepha wayegula ngesimo esibuhlungu, waqala waba ne-encephalitis ngakho-ke izinguquko zazanda. Kwakudingeka ukwelapha i-IUI, kepha njengoba umuthi ubiza inkulungwane yedola, awuzange uphathe izingane ezazilahliwe ezibhedlela. Kukhona okuthiwa "uhlu olumnyama". Baqala ukwelashwa kuphela lapho ingane iqala ukubamba ikhanda lakhe. Base befika bonke abantu, bangena lo muthi, njll.
Bengingazi uhhafu walokhu, ngoba odokotela bafihle izivivinyo, njll. Impela, baphuthelwa yingane. Futhi i-anticonvulsant ayibekwanga khona manjalo. Kwakunamaphutha amaningi, futhi yize ngangingemncane, bengiyisiphukuphuku, bengingazi lutho ngesifo sokuwa. Kodwa-ke, cishe akekho umama ongayedwa wengane ephilile owaziyo ngalokhu. Kulapho lapho becindezela wonke umuntu eqala ukuba nentshisekelo futhi afunde izincwadi.
Ngokuvamile, sibonga ukwesekwa, bekukuhle ukwazi ukuthi umuntu ukhathalela ikusasa lengane yami. Ngisho namanje ngiyakhala. Ngiyabonga
Imithi enobisi lukamama. Izifo zikamama ngesikhathi sokuncelisa.
Sekuyiminyaka eminingi manje, ngihlushwa isifo sikashukela mellitus engizijova ngayo i-insulin uqobo. Le ndlela iyodwa ayilunge futhi ibuhlungu. Ngingakwazi ukufaka i-insulin ngamaphilisi?
. Lezo zinto ezingena kahle ngomgoqo wegazi-lobuchopho, zingena kahle ngomgoqo wegazi-lobuchopho. Ngokusobala, izidakamizwa ze-hypnotic kufanele zibekwe endaweni yokuqala: i-phenobarbital, i-barbital sodium, i-etaminal sodium nezinye izinto ezitholwayo ze-barbituric acid. Nazo ngokwazo zithengiswa kuphela ngokuya ngencwadi kadokotela okhethekile, kepha ziyingxenye yamalungiselelo amaningi wokuhlanganisa lapho okuqukethwe kwama-barbiturates kuphansi, futhi ngenxa yalokho kubonakala kungeyona ingozi, kepha hhayi enganeni.
. Imithi elwa namagciwane ye-oleandomycin phosphate ne-lincomycin hydrochloride ayinangozi enganeni. Amathumbu engane Ekugcineni, isithiyo sokugcina amathumbu engane uqobo. Izinto ezithile ezitholwe ngobisi lukamama zimane zigaywe yizingane. Lesi yisiphetho samalungiselelo amaningi ama-hormone wesimo se-peptide. Esikhuweni sikashukela, umama uyaqhubeka nokuthola i-insulin, yize kuyiqiniso ukuthi kukhishwa ubisi.
ISwinsulin iyisisombululo esinamanzi se-crystalline insulin etholakala kuma-pancreas ezingulube. Umuthi usetshenziswa ezigulini ezimelana nomuthi otholakala kuma-pancreas ezinkomo.
IMonosuinsulin ilungiselelo elisebenza ngokufishane eliqukethe i-crystalline porcine insulin, enomphumela osheshayo noshibisholo wokushukela. Isetshenziselwa ukumelana ne-insulin, i-lipodystrophy, ukusabela kwendawo okwenzeka kuyo yonke indawo futhi okujwayelekile okuvela ngenxa yokulimala kwamanye amalungiselelo e-insulin. I-Monosuinsulin iphathwa ngokungahambisani noma ngemisipha imizuzu engu-15 ukuya kwengama-20 ngaphambi kokudla, okukodwa kuya kaningana ngosuku.
Isenzo senzeka ngemuva kwemizuzu engu-15 ukuya kwengama-20, umphumela omkhulu utholakala ngemuva kwamahora ama-2, ubude besidakamizwa abukho ngaphezu kwamahora ayi-6. Uma kwenzeka kuvela ukungalingani komzimba, ukuhlolwa kwe-intradermal (0.02-0.04 U) kwenziwa ngaphambi kokusebenzisa i-monosuinsulin. Nge-lipodystrophy, ikhambi liphathwa ngokungajwayelekile emngceleni wendawo enempilo nethintekile yamafutha angaphansi: ezinganeni, amayunithi ama-2-5, kubantu abadala, amayunithi ama-4 ukuya kwezinsuku ezingama-30 kuya kwengama-40.
Ukumiswa kwe-zinc insulin ukumiswa okuhlanganisa ukumiswa kwe-amorphous ne-crystalline zinc insulin.
Ukumiswa kwe-zinc i-zinc amulin ukumiswa kungukumiswa ngendlela ye-amorphous powder ku-acetate buffer ubude besikhathi samahora angama-10 ukuya kwangu-12 nomphumela omkhulu phakathi kwamahora we-7 okuqala.
Ukumiswa kwe-crystalline zinc insulin ukumiswa okungenamsoco kwe-crystalline insulin ku-acetate buffer, umuthi onesikhathi esifinyelela emahoreni angama-36, esiphezulu sivela emahoreni ayi-16 - 20 ngemuva kokuphathwa.
Ukumiswa kwe-protamine-insulin ukumiswa okungenamsoco kwamakristalu e-insulin ayinkimbinkimbi ne-protamine ku-phosphate buffer.
I-Triprotamine-zinc-insulin - amabhodlela ayi-10 ml, ukwakhiwa: i-insulin - amayunithi angama-40, i-chloride ye-zinc - 0,08 mg, i-triprotamine - u-0.8 ml, ushukela - 40 mg, iphilisi le-sodium eliphakeme - cishe u-4 mg, tricresol - 3 mg
I-Globalbin-zinc-insulin isidakamizwa isikhathi eside, ngokwesikhathi sesenzo sithatha indawo ephakathi kwesidakamizwa esivamile ne-Triprotamine-zinc-insulin.
I-Protamine-zinc-insulin ukumiswa okuncane kombala omhlophe. Isici sokumiswa, siqhathaniswa nomuthi ojwayelekile, ukuqala kancane kokusebenza kanye nesikhathi eside.
Ukumiswa kwe-protamine-zinc-insulin ukumiswa okuyisisekelo kwe-crystalline insulin, i-protamine, i-zinc chloride ne-sodium phosphate, umuthi wezinyathelo ezenziwa isikhathi eside.
I-insulin B - insulin esebenza isikhathi eside ngokufakwa kwe-aminoquinocarbamide hydrochloride.
Ukumiswa okwesikhashana kwe-insulin - i-insulin ye-amorphous ingulube exutshwe ne-zinc kanye ne-crystalline izinkomo ze-insulin eziyinkimbinkimbi ne-zinc (ngokwesilinganiso 3: 7). Umuthi uyisenzo esenzeka isikhathi eside, uphathwa ngokungaziphathi futhi ungaziphathi kahle ngesimo sikashukela esilinganiselayo nesinzima. Umphumela wehlisela ushukela wenzeka emahoreni ama-2 - 4, ufinyelela inani eliphakeme lomsebenzi emahoreni ama-8-10 kuya kumahora angama-20- 24.
Imithamo kanye nenani lemijovo ngosuku kusethwa ngokulandelana, kucatshangelwa inani likashukela okukhishwe kumchamo ngezikhathi ezihlukile zosuku, izinga likashukela wegazi. Umuthi awusetshenziselwa ukwakheka kwesifo sikashukela kanye nesimo esithandekayo. Uma kwenzeka kweqisa ngokweqile, kungavela isimo se-hypoglycemic kanye ne-allergic (urticaria, ukuqubuka, ukulunywa kwesikhumba, i-edema kaQuincke).
Ukumiswa kwe-insulin-semilong - kuqukethe i-insulin ye-amorphous porcine eyinkimbinkimbi ne-zinc. Umuthi isenzo eside. Kusetshenziswe isifo sikashukela i-mellitus yokuqina okulinganiselwe nefomu elinzima, ne-hyperglycemia yesikhathi sosuku ne-glucosuria, okulawulwa ngokungahambi kahle noma ngokuxinana. Umphumela ubonwa ngemuva kwamahora we-1-1,5, umsebenzi omkhulu - ngemuva kwamahora we-5-8. Isikhathi somuthi singamahora ayi-10-12.
Ukumiswa kwe-insulin-ultralong - iqukethe i-insulin ye-crystalline eyinkimbinkimbi ne-zinc. Faka isicelo ngokunqenqemeni nange-intramuscularly nesifo sikashukela sokulwa okulinganiselwe nefomu elinzima, engxenyeni yesibili yobusuku nasekuseni kakhulu ekuseni. Umphumela wehlisela ushukela ubonwa ngemuva kwamahora angama-6-8. Kuthatha amahora angama-30-36.
I-Insulin - Imiyalo esetshenzisiwe
Kunama-pathologies ambalwa lapho kukhonjiswa khona ukwelashwa:
thayipha 1 futhi uthayiphe ushukela ongu-2
isifo sikashukela acidosis,
isifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa.
Uma kwenzeka isimo esimnandi esigulini, kufanele alaliswe esibhedlela. Uma impilo ingathuthuki, i-hemodialysis iyenziwa. Kuzo zonke ezinye izimo, lapho ingekho imiphumela emibi yokuphendula, phatha ukwelashwa kwezidakamizwa okusebenzayo. Isilinganiso kanye nesikhathi sokwelashwa kunqunywa udokotela oya kuye ngokuqina kwezimpawu zomtholampilo zalesi sifo.
Kwimithamo emincane (amayunithi ama-5 - 10), i-insulin isetshenziselwa izifo zesibindi (i-hepatitis, izigaba zokuqala ze-cirrhosis), i-acidosis, ukukhathala, ukwehla komsoco, i-furunculosis ne-thyrotooticosis.
Ekusebenzeni kwe-neuropsychiatric, i-insulin isetshenziselwa utshwala, kanye nokwehliswa kwesimiso sezinzwa (kumithamo ebangela isimo se-hypoglycemic).
E-psychiatry, yokwelashwa kwe-insulinocomatosis (ekwelapheni ezinye izindlela ze-schizophrenia, isixazululo se-insulin senziwa ngobuningi obukhulu, okuthi, ngokukhuphuka komthamo kancane kancane, kubangele ukwethuka kwe-hypoglycemic).
Ku-dermatology, i-insulin isetshenziswa ku-toxidemia yesifo sikashukela, njengekhambi elingenangqondo le-eczema, induna, i-urticaria, i-psoriasis, i-pyoderma engamahlalakhona kanye nezilonda zesikhumba zemvubelo.
Ngokuvamile, i-insulin ilawulwa ngokungaziphathi kahle noma ngamakhambi, ngaphakathi - kuphela ezimweni ezinzima kakhulu ezinesifo sikashukela, amalungiselelo amisiwe aphathwa kuphela ngaphandle kokuzizwa.
Ukufakwa komthamo wansuku zonke kwenziwa ngemithamo engama-2-3 isigamu sehora - ihora ngaphambi kokudla, umphumela womthamo owodwa womuthi uqala ngemuva kwemizuzu engama-30-60 bese kuthatha amahora angama-4-8.
Ngokuphathwa kwe-insulin ngaphakathi kwe-insulin, umphumela omkhulu we-hypoglycemic utholakala ngemuva kwemizuzu engama-20-30, izinga likashukela libuyele ezingeni lasekuqaleni ngemuva kwamahora angama-1-2.
Ngaphambi kokugcwalisa i-syringe yokumiswa kokulungiswa kwe-insulin yesikhathi eside, okuqukethwe kufanele kuzanyazanyiswe kuze kube yilapho kwakheka ukumiswa okufananayo ebhodleleni.
Uma kwenzeka isifo sikashukela i-mellitus, ukwelashwa kwenziwa kuncike ekudleni ngasikhathi sinye, umthamo usungulwa ngokuya ngesifo esiqinile, isimo sesiguli nokuqukethwe ushukela kumchamo (ngokususelwa kuyunithi eli-1 kuyo yonke i-5 g kashukela othulwe emchameni). Imvamisa, imithamo ye-insulin isukela kuma-10- 40 amayunithi ngosuku.
Ngomqondo onesifo sikashukela, umthamo wansuku zonke wezidakamizwa ophathwe ngaphandle kokukhula ungalethwa kuma-PIECES ayi-100 nangaphezulu, ngokuphathwa kwe-intravenous - okufika kuma-50 PIECES ngosuku.
Ku-toxidermia yesifo sikashukela, i-insulin ibekwe kumithamo emikhulu, inani layo eliya ekucasheni kwesifo esiyimbangela.
Kwezinye izinkomba, imithamo emincane ye-insulin ivame ukubekwa (amayunithi ayi-6 - 10 ngosuku), imvamisa (ngokukhathala okujwayelekile, izifo zesibindi) kuhlangene nomthwalo weglucose.
Izindlela zokupheka kanye nezincomo zeNdlu Yabesifazane.
Uma kwenzeka wenqaba kubaphathi ngezizathu ezingenangqondo, kubhalwe isikhalazo kubo bonke abasebenzi abavimbela ithuba lokuthola umuzwa wokukhetha kwi-Federal Service for Supervision emkhakheni wezempilo. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukusebenzisa iwebhusayithi esemthethweni yeRoszdravnadzor, etholakala ku-http: //www.roszdravnadzor.ru.
Usebenzisa ifomu lokuphendula, ungafika engxenyeni yezikhalazo zezakhamizi, lapho kunemininingwane ephelele yokuthi ungasithumela kanjani isikhalazo, aphi amahhovisi ezifunda nokuthi asebenza ngasiphi isikhathi. Lapha futhi ungathola uhlu lwezindikimba ezigunyaziwe ezilawula imisebenzi yezinye izinhlangano.
Ngaphambi kokugcwalisa uhlelo, kunconyelwa ukuthwebula wonke amaphepha atholakalayo aqinisekisa ilungelo lokusebenzisa izinzuzo usebenzisa ucingo. Wonke amafayela athunyelwa ngefomu elilodwa lapho isikhalazo sizothunyelwa khona. Kubaluleke kakhulu ukuthi lesi simo sichazwe ngokuningiliziwe ngangokunokwenzeka, namaqiniso athile.
Uma kungenzeki ukusebenzisa ikhompyutha, isikhalazo sithunyelwa ngokubhala kusetshenziswa ifomu lencwadi elibhalisiwe ngeposi. Imibhalo ithunyelwa kuleli kheli: 109074, eMoscow, eSlavyanskaya isikwele, d. 4, k. 1. Ngokufanele, kuzothatha isikhathi eside ukulinda, ngoba kuthatha isikhathi ukuthumela, ukwamukela kanye nokucubungula okungezelelweyo. Ngokubonisana, ungasebenzisa izingcingo eMoscow:
I-insulin yi-hormone ebalulekile emzimbeni womuntu elawula ushukela wegazi. Ama-pancreas anesibopho sokukhiqiza le hormone, uma kwenzeka kuphulwa lesi sitho, i-insulin iqala ukukhiqizwa kabi. Lokhu kuholela ekuphazamisweni kwe-metabolic kanye nokukhula kwesifo sikashukela.
Abantu abanesifo sikashukela bayaphoqelelwa kukho konke impilo yabo ukuqapha amazinga kashukela, banamathele ekudleni okwelaphayo, ukuzivocavoca, kanye nokuphatha i-insulin nsuku zonke lapho kunikezwe udokotela. Uma le mithetho elula ingalandelwa, kuba nezinkinga ezahlukahlukene, okunzima kakhulu ukuzelapha.
Iziguli eziningi nezihlobo zabanesifo sikashukela banesifiso sokuthi kutholakale i-insulin noma cha. Ungathola i-hormone ngemali ngaphandle kwedokhumenti, kanye neyamahhala, ngemuva kokunikeza umuthi okhombisa umthamo ngqo wesidakamizwa. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi lapho uthenga umuthi we-hormonal ngaphandle kadokotela, umuntu uzibeka engcupheni ye-overdose, engaholela emiphumeleni eyingozi futhi engenakuphikwa.